अक्सर डाक्टरसँग यस्तो कुरा लुकाउँछन् बिरामी, जो हुनसक्छ हानिकारक - Sajhamanch
सामान्यतः चिकित्सकले कुनै उपचार सुरु गर्नुअघि बिमारीको स्वास्थ्य-इतिहास बुझ्न खोज्छन् । बिमारीलाई यसअघि के भएको थियो, कस्तो रोग लागेको थियो, त्यसको उपचार कसरी गरियो, के औषधी खुवाइयो आदि । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, उनको रोगको जड के थियो ? त्यसको सही उपचार भयो वा भएन ? अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?
युवतीहरुमा देखिने कयौ किसिमका शारीरिक समस्या
भन्छन्, ‘महिलाहरुमा हर्मोनको गडबडी भएमा यो पनि यस्तो समस्या निम्तने गर्छ । र, यसको एउटै मात्र उपचार भनेको समयमा उपचार र खानपानमा विशेष ध्यान नै हो ।’ । महिलाहरुको तौल नियन्त्रण गरेर पनि यो समस्या कम गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनका अनुसार महिलाहरुमा हर्मोन सम्बन्धि गडबडीकै कारण कहिलेकाही महिनामा दुई पटक सम्म पनि महिनावारी हुने गर्छ । जसका कारण शरीरबाट धेरै रगत खेर गई शरीर कमजोर हुने गर्छ । र, विभिन्न किसिमको चेकजाचद्धारा पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
स्तनमा गाठागुठी देखिने
पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पिसिओएस्)
पिसिओएस भएमा महिलाहरुको अण्डकोषमा ससाना फोका आउने गर्छ । यस्ता समस्या भएमा महिनावारी अनियमित हुनुका साथै पेट दुख्ने गर्छ । यदी कसैको महिनावारी अचानक अनियमित भएमा वा बन्द भएमा तुरुन्तै चिकित्सकसित परामर्श गर्नु पर्दछ । पेटको अल्ट्रासाउड गरेर युवती तथा महिलाहरुमा पिसिओएस भए, नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । हुन त पिसिओएस् हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन । समयमै सही उपचार गरेर पनि यो समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न सकिन्छ ।
कुमारी अवस्थाको गर्भ
July 10, 2018 10:03 am | स्वास्थ्य